Global Voices teny Malagasy » EWAMT: Manao fihetsiketsehana ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Aogositra 2018 2:55 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Liva Andriamanantena
Tonga hatrany Yemen ihany koa ny onjan'ny fitroarana tany Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra. Tamin'ny volana Janoary 2011, Yemenita an'arivony no nanomboka nanao fihetsiketsehana tao an-drenivohitra Sanaa sy tany an-kafa nitaky ny fialàn'ny filoha Ali Abdulla Saleh, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona mahery. Nahafatesana sy nahartrana olona marobe (vakio amin'ny antsipiriany ny fitantarana manokana avy amin'ny Global Voices ) ny famoretana nataon'ny miaramila tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny tanàndehibe maro . Ny tena nahavariana dia nihamaro ireo vehivavy mpanao fihetsiketsehana no nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana.
Manana ity fanavaozam-baovao  ity i Ghaida'a al Absi avy ao amin'ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’  (EWAMT)  avy any Yemen :
Nizara ny zavatra niainany nandritra ny fitroarana ny mpikambana ao amin'ny tetikasa EWAMT. Nanoratra  i Kholoud ao amin'ny tetikasa Ambitious hoe :
Nanoratra  i Ebtisam Al-Mohmmdy ao amin'ny Yemeni Notes hoe :
Marihina eto fa nahazo fandrahonana  noho ny andraikiny tao amin'ny hetsi-panoherana ny bilaogera sy ny mpanao gazety Yemenita.
Naneho hevitra tao anaty tononkalo  i Nabiha Kadiri raha niresaka momba ny fitroarana.
Nahatsikaritra ny fitombon'ny bilaogera Yemenita, indrindra fa ny vehivavy, izay manandratra ny feony sy maneho ny fomba fijeriny mampiady hevitra izay tsy azo lazaina any an-kafa ny tatitra  iray tao amin'ny Yemen Observer.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/21/124911/
 fitantarana manokana avy amin'ny Global Voices: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/yemen-protests-2011/
 Manana ity fanavaozam-baovao: https://rising.globalvoicesonline.org/yemen/2011/03/20/days-of-rage-in-yemen/
 ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’ : https://rising.globalvoicesonline.org/projects/empowerment-of-women-activists-in-media-techniques-yemen/
 nahazo fandrahonana: https://globalvoicesonline.org/2011/03/14/yemen-a-life-threatening-message-to-blogger-afrah-nasser/
 Naneho hevitra tao anaty tononkalo: http://nalqadri.blogspot.com/2011/02/blog-post.html